“Pogba ka tag kooxda” – Farriimo cusub oo ka imanaya taageerayaasha Man United – Gool FM
(Manchester) 28 Agoosto 2019. Laacibka kooxda kubadda cagta Manchester United ee reer France Paul Pogba ayaa fariimo cusb ay kaga imaanayaan taageerayaasha Red Devils.
Taagerayaalka ayaa waxay soo qaateen boorar ay ku qoran yihiin “Pogba Out” ee ah “Pogba Ka tag kooxda”, sidaas darteed taagerayaalka waxay codsadeen inan xayiraad lagu soo rogin laacibiinta xiliga ay ka tagayaaan naadiga.
Dhacdadan ayaa daba socota kaddib aflagaadooyin uu xiliyadii lasoo dhaafay la kulmay Pogba, kaddib rigooradii uu qasaariyay kulankii Wolverhampton, taasoo ka dhigtay in Manchester United ay barbaro gasho.
Dhawaan ayeey ahed kaddib markii uu Paul Pogba ka jawaab celiyay Isir-faquuqii ay kula kaceen taageerayaasha, wuxuuna sheegay in awoowayaashiis iyo waalidiintiisa ay u soo dhibtoodeen si jiilkooda maanta ay xur u noqdaan.
Si kastaba ha noqotee, Pogba ayaa ka mid ah xiddigaha magacyadooda sida weyn looga hadal haayay tan iyo bilawgii suuqan xagaaga,waxeyna saxaafada sheegtay inuu u dhaqaaqayo midkood kooxaha Real Madrid ama Juventus, kaddib markii uu ku dhawaaqay inuu doonayo inuu ka tago Manchester United.
Laakin Ilaa iyo hadda, ma jiro wax war ah oo ku saabsan bixitaanka Pogba, iyadoo maalmo kooban oo kaliya ay ka harsan yihiin in albaabada loo laabo suuqan xagaaga.
Tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane oo diiday inuu ka rajo dhigo doonista Paul Pogba